मनाेरन्जन Archives - Page 75 of 102 - Purbeli News
Trending # प्रमोद खरेल10# ज्योति मगर8# बोके दाह्री7# सेन्ट्रल प्लाजा5# दशैँ2# सिनेफ्लिक्स2# मिस गुरुङ इन्टरनेशनल1# सक्किगोनि1
नेपाल आइडलको कन्सर्टमा जे देखियो (फोटो फिचर र भिडियो)
काठमाडौँ। शनिबार टुडिखेलमा भएको नेपाल आइडलका अन्तिम तीन प्रतिस्पर्धीको कन्सर्टमा केही असहज दृश्य पिन देखिए। टप ३ प्रतिस्पर्धीहरु निशान भट्टराई, प्रताप दास र बुद्ध लामाको कन्सर्ट हेर्न आएका केही महिला र बालबालिका भिडमा अत्तासिएर अचेत भए। दर्शकहरुको भिडमा बालबालिका पनि चपेटमा परे। युवतीहरू भटाभट दर्शक दृघामा ढलेपछि सम्हाल्न सुरक्षाकर्मीलाई निकै समस्य...
चुड्का–कौरा गीत ठुल ढुंगाको बजारैमा (भिडियो सहित)
काठमाडौं / ‘ठुल ढुंगाको बजारैमा’ बोलको मौलिक चुड्का–कौरा गित र भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गायक÷गायिकाहरु दुर्गा गुरुङ, प्रेम गुरुङ, तारा सिरिश मगर र भिम गुरुङले संयुक्त रुपमा गाएको यो गीतमा रेशम गुरुङको संगीत तथा सुरेश गुरुङ र रेशम गुरुङको शब्द रहेको छ । निर्भाना कला केन्द्रले निर्माण गरेको भिडियोको निर्देशन मनाङ गुरुङले निर्देशन गरेका छन् । करण चै...
पाल अाइडल टप ३ प्रतिस्पर्धी प्रताप, बुद्ध र निशानले यसरी हल्लाए टुडिखेल (भिडियाे)
नेपाल आइडलका टप ३ का प्रतिस्पर्धीहरुको बिषेश कन्सर्ट सम्पन्न भएको छ । शनिबार टुडिखेलमा निशान भट्टराई, प्रताप दास र बुद्ध लामाको कन्सर्ट हेर्न आएका आधा दर्जनदर्शक कार्यक्रम स्थल टुडिखेलमा बेहास भए । उक्त कन्सर्टमा दर्शकहरुको निकै बाक्लो घुँइचो भएका कारण उनीहरु फेन्ट भएका हुन् । टप ३ प्रतिस्पर्धीको उपस्थिति हुने जानकारी भए संगै दर्शकका भिड थामि नसक्न...
पत्रकार सम्मेलनमै प्रदिपको सुरक्षामा ४ विदेशी बडिगार्ड ? (भिडियाे सहित)
पत्रकार सम्मेलनमै प्रदिपको सुरक्षामा ४ विदेशी बडिगार्ड, अनमोलपछि को–कोले गरे बडिगार्डको सिको ?
सडकमा ट्राफिक नियम सिकाउदै सुन्दरीहरु (तस्विरहरू सहित)
धरान र इटहरीको व्यस्त बिरेन्द्र चौकमा शुक्रबार बिहान ट्राफिक हातमा यात्रुले गल्ति गर्न सक्छ तर तपाई नगर्नुस भन्ने प्लेकार्ड बोक्दै कोहि वृद्हरुलाई बाटो काट्न तथा कोहि मोटरसाईकल चालकहरुलाई हेल्मेट लगाउन सिकाउदै थिए । आगामी असोज ६ गते धरानमा आयोजना हुने नेपालआइस नेचुरा मिस पुर्वान्चलका सहभागी प्रतियोगीहरु क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्यवमा ...
आजबाट देशभर ‘जोनी जेन्टलम्यान’
काठमाडौँ । आजबाट राजधानी लगायत देशभरका हलहरुमा चलचित्र ‘जोनी जेन्टलम्यान’ प्रदर्शनमा आएको छन् । नितिन चन्द निर्देशित ‘जोनी जेन्टलम्यान’ यो साताका लागि फ्रेस रिलिज हो । जोनी जेन्टलम्यान पल शाह र आँचल शर्मा अभिनित सिनेमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सिनेमा हो । गीत,संगीत र ट्रेलरका कारण चर्चामा रहेको सिनेमालाई एनड्रिउ पौडेल र अजय मल्लले निर्माण गरेका हु...
के गर्दै छन्, नेपाल आइडलको ‘टप टेन’बाट बाहिरिएकाहरु ?
काठमाडौं, भदौ ३० / देशभरका हजारौँ प्रतिस्पर्धीबाट सुरु भएको नेपाल आइडल ‘टप थ्री’को चरणमा पुगिसकेको छ । फ्रेन्चाइजका रूपमा नेपालमा पहिलोपटक सुरु भएको नेपाल आइडलले छोटो समयमै लोकप्रियता कमायो । उत्कृष्ट चार प्रतिस्पर्धीका लागि ३७ लाखभन्दा बढी भोट आउनुले पनि यसको लोकप्रियतालाई प्रस्ट्याउँछ । ‘टप थ्री’का प्रतिस्पर्धी नेपाल आइडलमै भिडिरहेका छन् भने ‘...
अञ्जु पन्तको कार्यक्रममा ‘बबाल’
काठमाडौं, २९ भदौ । क्रिश्चियन धर्म अंगालेकी गायिका अञ्जु पन्तले हिन्दू धर्मविरुद्ध बिष बमन गर्ने गरेको कुरा त पुरानै हो । क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा खुलेरै हिँड्न थालेकी गायिका पन्तले क्रिश्चियनहरूको प्रवचनमा हिन्दू र ईस्लाम धर्मको उछितो काढ्दै आएकी छन् । गायिका पन्तले पछिल्लो समय मुस्लिम धर्मको पनि चर्को विरोध गर्ने गरेकी छिन् । क्रिश्चियनको प्रवच...
भित्री बस्त्र कति महँगा लगाउँछन् नेपाली सेलिब्रेटी ?
सामान्यतया अरूलाई देखाउन र आफ्नो पर्सनालिटीका लागि मान्छेहरू महँगो कपडा लगाउँछन् । तर, बाहिरी कपडाहरू मात्र होइन, भित्री कपडाहरू पनि महँगा र ब्रान्डेडमै मोह बढ्दै गएको छ । ५ हजार रुपैयाँसम्मका अन्डरवेयर र १० हजार रुपैयाँसम्म ब्रा नेपाली बजारमा बिक्री हुने गरेको छ । खासगरी नेपालका सेलेब्रेटीहरू इनर वेयरमा निकै ध्यान दिन्छन् । १० हजारसम्मको ब्रा ने...
सुरक्षाकाे घेरामा भद्रगोलको सुटिङ ( भिडियो सहित )
हास्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल सुरक्षा गार्डको घेरामा छायाँकन हुन थालेको छ । छायाँकन स्थलमा जम्मा हुने भिड नियन्त्रणका लागि दुई जना सुरक्षा गार्डको घेरामा भद्रगोलको छायाँकन हुन थालेको हो । मुड्खु भञ्ज्याङमा भद्रगोलको सुटिङ हेर्न र घुम्न आउनेहरुको संख्या बढ्दै गएपछि सुरक्षा गार्ड राखिएको श्रृंखलाका लेखक तथा निर्देशक कुमार कट्टेल (जिग्री)ले जानकारी दिएक...